SHAWULA NICKY: UMartin Vrijland
Vula incwadi kuPeter R. de Vries enkantolo yaseNicky Verstappen
ahanjiswe HLELA NICKY	by UMartin Vrijland	ngo-13 December 2018	• 13 Amazwana
Othandekayo uPeter R. de Vries, ngithakazelisa kakhulu ngilandela lolu cwaningo yizindaba uNicky Verstappen, lapho uJos Brech enecala lokusobala emphakathini. Ngenxa yokucaca: Angiyena umvikeli kaJos Brech nanoma yikuphi ukuhlukumeza ngokocansi noma umbulali. Noma kunjalo, kubonakala sengathi leli cala lingumqondo wengqondo [...]
I-Jos Brech: "Inkantolo ye-Psyop" kuphela emva kwehlobo le-2019
ahanjiswe HLELA NICKY	by UMartin Vrijland	ngo-12 December 2018	• 10 Amazwana
Kusukela kuma-tvest livestream we-Telegraaf intatheli uSaskia Belleman, kubonakala sengathi le nkinga ye-Nicky Verstappen (yokuzicabangela) yengqondo ayiyona into nje kuphela inkulumo. Amanye ama-tweets alandela ukuthi yikuphi okuzobonisa ukuthi uJos Brech uvume ukuthi ube nezingane ezingcolile zobulili kwi-PC yakhe, kodwa ukuthi bathi babanjwa yi-virus. UJos [...]
Amaphoyisa we-33 athola ifayela elidala likaJos Brech emuva konyaka!
ahanjiswe HLELA NICKY, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-9 November 2018	• 0 Amazwana
Kwakuyimiphumela yokusesha okusheshayo, futhi kwakungeyona umsebenzi ongenakwenzeka, kodwa ngokuzumayo kwakukhona ifayela elidala likaJos Brech, lapho ayezokwenza khona ukuhlukunyezwa ngokocansi nabafana abancane. Lelo cala lahlehliswa ngokomthetho, kodwa lokho akunandaba. UPeter R. de Vries ubelokhu enabo bonke oxhumana nabo [...]
ahanjiswe HLELA NICKY, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-26 Septemba 2018	• 11 Amazwana
Yiqiniso, lonke elaseNetherlands likhululekile ukuthi icala likaNicky Verstappen laholela ekubanjweni kukaJos Brech. Ngaphambili, i-DNA yaholela ekuthunjweni kukaJasper Steringa eNkantolo yeMarianne Vaatstra, ngakho-ke i-DNA yiphumelelo. Kunoma yikuphi okuholela ekutheni uhlelo olusha lwezomthetho olwethulwe yiqhawe lezombangazwe likaPeter R. de [...]
ahanjiswe HLELA NICKY, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-25 Septemba 2018	• 8 Amazwana
Iningi lezehlakalo zokubulala isikhathi eside ezitholwa kakhulu emithonjeni yezindaba manje zixazululwa ngegama elithi magic DNA. Bayaxazululwa ngecala ngamaphephandaba nguPeter R. de Vries bese behambisa esiteshini sezindaba enkantolo esithatha isigwebo somphakathi esilenga, ngaphandle kokuvikela ngokusemthethweni ngokomthetho. [...]
Indlela abezindaba bahlela ngayo indaba yabo ekuhlaziyeni okubucayi futhi baqhubekele ukuphambanisa indaba yabo yokwethembeka (Jos Brech)
ahanjiswe HLELA NICKY, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-24 Septemba 2018	• 3 Amazwana
Ngimangala lapho ngibheka ukuphindaphinda kwesikhwama, lapho ummeli kaJos Brech, uGerald Roethof, ehlelela indaba yakhe encwadini engayishicilela ngelinye ilanga ngaphambi kokusakaza. Kwakuhlaba umxhwele kakhulu ukuthi ngokuzumayo kukhona izintambo ezimbili ezintsha ngokuphelele etafuleni. Iziqu ezintsha ezenza abantu baqiniseke mayelana [...]
ahanjiswe HLELA NICKY, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-20 Septemba 2018	• 12 Amazwana
Uma wena, njengoMshushisi Womphakathi, usebenza iminyaka ukulungisa abantu ngezinyathelo ezintsha ngokusebenzisa i-PsyOp (ukusebenza kwengqondo), khona-ke uzobe uqinisekisa ukuthi unamadobli alungile ezikhundleni ezifanele ukuqhubeka nendaba ebuhlungu. ukuze uphendule. Lokhu kusho ukuthi nawe unomthelela [...]
Kungani uJos Brech ayehamba ngokuyisimangaliso kangaka?
ahanjiswe HLELA NICKY, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-6 Septemba 2018	• 2 Amazwana
Indaba ezungeze uJos Brech, osolwa ngokubulala nomhlukumezi kaNicky Verstappen, uphuthunyiselwa phezulu. Izolo wathunyelwa eNetherlands ngendiza yangasese. Kungabiza ezinye! Indiza ehleliwe yayingenakwenzeka, ngoba sikhuluma ngendoda esongelayo izidakamizwa inkosi eyayingakwazi ukukhululwa ngabangane bayo be-mafia noma kunini. [...]
I-DNA igama lemilingo elixazulula zonke izenzo zokubulala nokuhlukunyezwa ngokobulili!
ahanjiswe HLELA NICKY, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-30 Agasti 2018	• 3 Amazwana
I-DNA yindlela entsha yemilingo yamaphoyisa nobulungiswa futhi wonke umuntu ugcwele udumo! Nge-DNA ungakwazi ukuxazulula ngempela konke. Isibonelo, uma umakhelwane wakho etholakele efile futhi kukhona i-DNA ezembatho zakhe, khona-ke siyazi ngokushesha lowo umbulali! Yilokho ukuphumelela kwezobuchwepheshe [...]
Ukwenza umbulali ku-Nicky Verstappen - Jos Brech PsyOp
ahanjiswe HLELA NICKY, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-29 Agasti 2018	• 1 Comment
Uchungechunge lwe-Netflix 'Ukwenza Umbulali' lubonisa ukuthi abantu bangabambelelwa kanjani ngokuvumelana neziphetho ezingalungile iminyaka. Lapho i-DNA kuleso chungechunge ngokuvamile iyingxenye ehlengayo, i-DNA ingase ibe isimiso esisha esenza ukuthi i-Murderer isekelwe. Ngokusebenza kwengqondo (PsyOp) uqinisekisa ukuthi [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.223.692